တရုတ်နိုင်ငံ၏ Zhurong အာကာသယာဉ် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင် အကွာအဝေး ၁.၉ ကီလိုမီတာကျော် ခရီးနှင်ပြီးဖြစ် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ် Zhurong အား ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေ ၂၂ ရက်က ပေကျင်း လေကြောင်းအာကာသ ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ၌ သရုပ်ဖော်ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ မေ ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သွား အာကာသယာဉ် Zhurong သည် ယမန်နှစ် မေလက အင်္ဂါဂြိုဟ် မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ အာကသယာဉ်ဘီးများ ပထမဆုံးထိတွေ့ပြီးချိန်မှစ၍ အကွာအဝေး ၁.၉ ကီလိုမီတာကျော် ခရီးနှင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသား အာကာသစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၏ လကမ္ဘာစူးစမ်းလေ့လာရေးနှင့် အာကာသအစီအစဉ်စင်တာမှ ထုတ်ပြန်သော နောက်ဆုံးအချက်အလက်အရ သိရသည်။Zhurong အာကာသယာဉ်သည် မေ ၁ ရက်အထိ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှ ကီလိုမီတာ သန်းပေါင်း ၂၄၀ အကွာအဝေးရှိ အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အင်္ဂါဂြိုဟ်ဆိုင်ရာနေ့ရက်ပေါင်း ၃၄၂ ရက်ကြာ သွားလာလည်ပတ်နေပြီဖြစ်သည်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်ဆိုင်ရာနေ့ရက်တစ်ရက်သည် ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိနေ့တစ်နေ့ထက် ခန့်မှန်းခြေ မိနစ် ၄၀ ပိုမိုကြာမြင့်ကြောင်း သိရသည်။
Zhurong အာကာသယာဉ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေ ၁၅ ရက်က အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ မြောက်ဘက်ခြမ်းရှိ ကွင်းပြင်ကျယ်ဖြစ်သော Utopia Planitia ပေါ်သို့ ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ယင်းအာကာသယာဉ်သည် ဂြိုဟ်ပေါ်သို့ စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းပြုလုပ်နေသလို ဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ နမူနာကျောက်တုံးများ စုဆောင်းခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
အင်္ဂဂြိုဟ်သည် ဆောင်းရာသီသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ သဲမုန်တိုင်းများ တိုက်ခတ်နိုင်ဖွယ်မြင့်မားခြင်းနှင့်အတူ ညအပူချိန်မှာလည်း အနုတ် ၁၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်သို့ ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်ရှိ ဆောင်းရာသီများသည် ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ လပေါင်း ၆ လနှင့် ညီမျှသောကာလရှိကြောင်း သိရသည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည် Zhurong အာကာသယာဉ်အား အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်လှည့်လည်သွားလာခြင်းနှင့် စူးစမ်းလေ့လာခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဘေးကင်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အပူချိန်အနိမ့်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ သဲကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ စွမ်းအင်လုံခြုံရေးနှင့် အခြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများ ပါဝင်သည့် အထူးဒီဇိုင်းများ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
လကမ္ဘာပေါ်သွားယာဉ် Yutu-2 သို့မဟုတ် Jade Rabbit-2 ကလည်း လကမ္ဘာဆိုင်ရာနေ့ရက်ပေါင်း ၄၂ ရက်ကြာ အလုပ်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းနှင့် လမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ၁,၁၈၁ မီတာ ရွေ့လျားခရီးနှင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း တရုတ် သိပ္ပံစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံက ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်က လွှတ်တင်ခဲ့သော လပေါ်ဆင်းသက်ယာဉ်နှင့် Yutu-2 ပါဝင်သည့် Chang’e-4 အာကာသယာဉ်သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်က လကမ္ဘာ၏ တစ်ဖက်ခြမ်း South Pole-Aitken ချိုင့်ဝှမ်းရှိ Von Karman ချိုင့်ကြီးတွင် ပထမဆုံးညင်သာစွာဆင်းသက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (Xinhua)
BEIJING, May2(Xinhua) — The Mars rover Zhurong has traveled more than 1.9 km since it first set its wheels on the surface of the planet in May last year, according to the latest data released by the Lunar Exploration and Space Program Center of the China National Space Administration.
China’s Chang’e-4 probe, includingalander and Yutu-2 launched on Dec. 8, 2018, made the first-ever soft landing on the Von Karman Crater in the South Pole-Aitken Basin on the far side of the moon on Jan. 3, 2019. ■
Photo : The simulated image captured at the Beijing Aerospace Control Center on May 22, 2021 shows China’s first Mars rover, Zhurong, driving down from its landing platform to the Martian surface, Beijing, capital of China. China’s first Mars rover, Zhurong, drove down from its landing platform to the Martian surface Saturday, leaving the country’s first “footprints” on the red planet. Zhurong’s first successful drive made China the second country after the United States to land and operatearover on Mars. (Xinhua/Jin Liwang)